हलिउड /बलिउड Archives - Music Our Choice
MOC	 Nov 25, 2019 46	0 0
MOC	 Sep 26, 2019 44	0 0
जय किशन फरार हुँदा शुभेच्छालाई तनाब, नपत्याए हेर्नुस् भिडियो
MOC	 Sep 20, 2019 10	0 0
राजुको शिवम् मा नायक र खलनायकको यस्तो तमासा (भिडियो सहित)
MOC	 Sep 18, 2019 0
काठमाडौं । यही असोज १७ गतेदेखि अल नेपाल रिलिजको तयारीमा रहेको चलचित्र शिवम् को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । राजु गिरीले पछिल्लो पटक निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रको ट्रेलर हाईलाईट्स नेपाल मार्फत सार्वजनिक भएको हो । एक्सनलाई मुख्य प्राथमिकता…
MOC	 Sep 16, 2019 0
काठमाडौं । नायक जय किशन बस्नेतले निर्माण एवम निर्देशन गरेको पछिल्लो चलचित्र हिरो नं. १ नेपालमा सफल प्रदर्शन भएपछि बिदेशमा पनि ब्यापक माग भएको छ । नेपालका दर्शकहरुले अत्याधिक मन पराएपछि बिदेशमा पनि यो चलचित्रको माग भएको हो । जय किशन…
MOC	 Sep 12, 2019 0
काठमाडौं । नायक जय किशन बस्नेतले निर्देशन गरेको पछिल्लो चलचित्र हिरो नं. १ भोली २७ गते शुक्रबारदेखि देशब्यापी रुपमा प्रदर्शनमा आउन लागेको छ । यो चलचित्र उपत्यका भित्र र बाहिर गरी कुल ८५ वटा हलमा प्रदर्शनमा आउँन लागेको हो । जय किशन बस्नेत…
पिजी सर्टिफिकेट पाएको चलचित्र हिरो नं. १ यही आउँदो भाद्र २७ गते देखि देशब्यापी प्रर्दशन हुदैँ
MOC	 Sep 5, 2019 0
काठमाडौं । नायक जय किशन बस्नेतको लेखन, निर्माण, निर्देशन तथा प्रमुख भुमिका रहेको चलचित्र हिरो नं. १ सेन्सर पास भएको छ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट सेन्सर पास भएको यस चलचित्रले पिजी सर्टिफिकेट पाएको छ । जय किशन बस्नेत फिल्मस्…
MOC	 Aug 31, 2019 0
काठमाडौं । नायक जयक किशन बस्नेतले निर्माण गरेको पछिल्लो चलचित्र हिरो नं. १ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । नायक बस्नेतकै सञ्चालनमा रहेको मोबाई टिभी नामक युटुव च्यानल मार्फत चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको हो । जय किशन बस्नेत फिल्मस्को…
सबैलाई हँसाउने मदन कृष्ण श्रेष्ठ ले आज सबलाई रुवाए
MOC	 Apr 3, 2018 0
MOC। काठमाडौँ। प्रख्यात हास्य कलाकार एवं गायक मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई पत्नी शोक परेको छ । उनकी ६७ वर्षीया पत्नी यशोदा श्रेष्ठको सोमबार राति पौने ११ बजे निधन भएको हो उनको मंगलबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्यष्टी गरिएको छ । २००८ साल पुस १४ गते…
यातायात व्यवसायी द्वारा नेपाली गीत सङ्गीत नबजाउन विज्ञप्ति जारी
MOC	 Apr 2, 2018 0
MOC। सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपाल ,प्रस्तोता समाज नेपाल र सङ्गीत उत्पादक समाज नेपाल को पहलमा मा जारी यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका को घोर विरोध गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात मा अर्को…
राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा युवा कवि ऐश्वर्य श्रेष्ठ भए प्रथम
समाचार। काठमाडौँ — प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा रामप्रसाद राईको १०९ औं जन्मजयन्ती अवसरमा रामप्रसाद राई स्मृति प्रतिष्ठानले केही महिनाअघि राष्ट्रिय कविता महोत्सव गरेका थिए। उक्त कविता महोत्सवका विजयी कविहरुलाई शनिबार राजधानीको राष्ट्रिय…
star	 May 3, 2017 0
पिसाब शरीरको सामान्य प्रक्रिया हो । पसिनाजस्तै पिसाबका माध्यमबाट पनि शरीरका लागि अनावश्यक तत्वहरु बाहिर निस्कन्छन् । जसलाई महसुस भएको एकदेखि दुई मिनेटभित्र फ्याँक्नुपर्छ । पिसाब थैली भरिनेबित्तिकै स्नायुप्रणालीले त्यसको संकेत मष्तिष्कमा…
मानिसले निश्चय नै आफूलाई सधैँ स्वस्थ राख्न चाहन्छ । तर, जति कोसिस गरे पनि रोगले शरीरलाई छाड्ने होइन । कताबाट रोग आइलाग्छ पत्तै हुँदैन । स्वस्थ्य रहनका लागि मानिस बिहानबिहानै दौडिन्छन्, जिम लान्छन्, जिउ मर्काइमर्काई ‘डान्स’ गर्छन् तै पनि…